ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလား?
Posted by POL on Jan 13, 2011 in News | 14 comments
Face book မှာပျန့်နှံ့နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံ ဘုန်းကြီးတပါးရဲ့တရားပွဲပါ။ဒါ ဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့လား
PO L has written 16 post in this Website..
View all posts by POL →
ရေးထားတာက စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း ပို့ချနေတာကဘုန်ကြီး တွေ့ရတာကအက ကခိုင်းနေတာ ဟောပြောတာလဲမတွေ့ရ ဘာတွေလဲသိတဲ့သူရှိယင်ဆက်ရေကြပါအုံး……
ထေရ၀ါဒ ဗုဓ္ဒဘာသာ လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ ပွင့်လေပြီးသော ဘုရားရှင်အပေါင်းတို့သည် လောက ဓမ္မတရားတော်များကိုသာ ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ထိုသို့သော အက သင်တန်းတရားမရှိပါ။သေနည်းသင်တရားသာ ရှိပါသည်၊မြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့သော တရားတော်၌ မုတ်ဆိုးတစ်သက်၊ယာတစ်ကွက်၊သဘင်တစ်မနက်။ထိုကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဓ္ဒဘာသာနှင့် လုံးဝ လုံးဝ မဟုပ်ပါ။
ဒီဗွိဘီ မှာ အဲဒီ အကြောင်း ပြောသွားတယ် ရှာပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရုံးကကြည့်တော့ ဘေးကလူတွေမသိအောင် အသံပိတ်ထားရတယ်..။
လူတွေလက်ခြေလှုပ်ကြတာကတော့ .. ယူအက်စ်မှာ ..သာသနာပြုနေတဲ့ ..ဟိန္ဒူတွေလမ်းလျှောက်က, ကြတာနဲ့တူသား..။ ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာရှိတယ်..။ ကြုံရင်တင်ပေးဦးမယ်..။
ဘားအံမြို့ ဇွဲကပင်ခန်းမမှာလုပ်တာဗျ။ ရှေ့ပိုင်းမှာကျေးဇူးတင်စကားပြောတော့ အမှတ်၁၁ ဆိုလား ၂၂ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်ဆိုလား၊ အခြားစစ်ဖက်နယ်ဖက် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာလည်း ပါသေးတယ်။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလည်း မသိဘူး။
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၁၀၇ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ဓမ္မဝိဟာရကျောင်းက စာသင်သား ဦးဓမ္မုသာရကို စွမ်းအားရှင်၂၀က ဝိုင်းရိုက်ပြီး သေပြီအထင်နဲ့ ကားပေါ်တင်သွားပြီး ကွင်းထဲမှာပစ်ထားခဲ့ဖြစ်ရပ်တခု ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့ညပိုင်းက ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ အဲဒီကိုယ်တော် ထပ်ပြီးရန်ရှာခံရမှာစိုးလို့ ရှောင်နေရသတဲ့။
အရင်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သံဃာဟာသံဃာပဲဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲများ အခုလို စွမ်းအားရှင် လူမိုက်နဲ့ တွေ့တော့ ဘာမှပြောဆိုဝေဖန်သံ မကြားမိတော့ပါလား။
ထိပ်ကျပြောင်နေပြီး … လူမမြင်ရတဲ့ နောက်ကချည်းဆံပင်လွှတ်ကောင်းနေတာလေ..။
အဲဒီ နံပါတ်ဝမ်းကို ကြော်ငြာဖတ်ရကတည်းက အာရုံရမိတာကတော့
“တရုပ်” ဇာတ်သွင်းမယ့် သင်တန်းဖြစ်ပါကြောင်း။
တရုပ် ပုံစံ တရုပ်အတွေးအခေါ်များနဲ့ တရုပ်လွှမ်းမိုးမှုကို တနည်းအထောက်အကူဖြစ်စေရန် စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးသင်တန်းဖြစ်ပါကြောင်း။
ရုပ်ဖျက်ပြီး ဝင်လာတဲ့ တရုပ်လွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိစေရန် တင်ပြပေးပါ။
အားလုံး ဝိုင်းပြီး ရှုံ့ချ ကန့်ကွက်ကြပါစို့။ အဲဒီအကြောင်း သပ်သပ်ရေးပါရစေ။
ဘာတွေလဲ…။ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေးလား…..အခြားသူတစ်ယောက်က ဦးဆောင်လုပ်တယ်ဆိုရင် လက်ခံနိုင်သေးတယ်။ ဘုန်းကြီးတစ်ယောက်လုပ်တာဆိုရင်တော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ နောက် ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ ကဒ် နဲ့ ကနေတဲ့ ကဒ် ခွဲထား တယ်ဆိုရင်တော့ မသိဘူး။ ဦးကြောင်ပြောသလိုဆိုရင်၂၂ခြေမြန်တပ်မ ဌာနချုပ်တို ဘာတို့ ကြားတယ်ဆို ရင် တော့ စစ်တပ်ကကောင်တွေ အရူးထကြတာနဲ့လည်းတူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ဘာ အသံမကြားရတော့….သေချာ လေ့လာဖို့ခက်နေတယ်..။
no1.jpg No.1 နံပါတ်ဝမ်း သတင်းကောင်းပါတဲ့ ။http://www.humanright-myanmar.com/2011/01/facebook-share_13.html မှာတွေ့တာ ကူးပေးလိုက်တာပါ။ တော်တော်ဆိုးတာပဲ။ ဒီအတိုင်းကြည့်နေရင်တော့ ပိုဆိုးကုန်မယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ?ရန်ကုန်အေးရှား ပလာဇာမှာသင်တန်းဖွင့်ထားတာတဲ့ ယုယုတို့ မနောတို့ ဆူးတို့ သွားမတက်၊ကြဘူးလား။
သင်တန်းတက်ပြီးတဲ့သူရှိယင်ပြန်ဝေငှကြပါအုံး ကောင်းကွက်ဆိုးကွက်လေးတွေသိရတာပေါ့ ။။
ဗုဒ္ဓရဲ့အယူလို့လုံးချမခံရဘို့အရေးကြီးတယ်ဗျ…နော်။ နစ္ဆ၊ ဂီတ၊ ၀ါဒိတ တဲ့။
သာသနာသန့်စင်ရေးကို ထပ်မံပြုလုပ်ရမည့် အချိန်တော့ ရောက်နေပါပီ
ဗုဒ္ဓရဲ့အယူဝါဒကို လုံးဝဆန့်ကျင်နေတဲ့ သင်တန်းပဲဗျာ
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ သင်တန်းမှာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ဘုန်းကြီးကပဲ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုမျိုးကို သင်ကြားပေးရမှာပေါ့ဗျာ
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုပြီး မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့
ဒီလိုလူတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရှေ့ရေး တွေးမိတိုင်း ရင်လေးတယ်ဗျာ